Guddoomiye Casir oo beeniyay in la isku dhafay xildhibaannada Galmudug – Kalfadhi
Guddoomiye Casir oo beeniyay in la isku dhafay xildhibaannada Galmudug
Afhayeenka baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug mudane Cali Gacal Casir ayaa si adag u beeniyay wararka sheegaya in la isku dhafay xildhibaannada ku jira baarlamaanka maamulkasi,sida ay tabisay idaacada Goob Joog.
Hadalkan ayuu guddoomiyaha ka sheegay kulan wada tashi ah oo uu dhinacyada bulshada kula qaatay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Guddoomiye Casir ayaa sido kale beeniyay in aanu jirin dastuur loo sameeyay Galmudug.
“Waxbo kama ogeyn isku dhafka xildhibaannada Galmudug, Dastuurka la sheegay maba arag, liiska xildhibaannada la iima keenin” ayuu yiri Casir.
Waxaa beryahan soo if baxayay khilaaf dhinaca siyaasadda ah oo soo kala dhex galay madaxda maamulka Galmudug.
Kulamada guud ee golaha shacabka oo la hakiyay